Ummeli uCrenshaw uyaphendula kuPete Davidson Esithi Uluhlobo Lokunyanzelwa ukuba Uxolise - Inkcubeko Yopopu
Ummeli uCrenshaw uyaphendula kuPete Davidson Esithi Uluhlobo Lokunyanzelwa ukuba Uxolise Nge-Joke ye-Eyepatch
UPete Davidson wenza iintloko kule veki emva kokuvuma i-televisedapology yakhe kwiRep. UDan Crenshaw wayenganyanisekanga ncam.
Inkqubo ye- NgoMgqibelo ebusuku Umhlekisi ubuyile kwi-theapologykwi-Netflix yakhe entsha, Uyaphila usuka eNew York . Umwisi-mthetho waseRiphabhlikhi unxiba isikizi ngenxa yomonzakalo awenzileyo ngelixa wayekhonza e-Afghanistan kwiminyaka esibhozo eyadlulayo.
Ungayigcina njani ikeyiki yesipili
Kungekudala emva kwengxabano, uCrenshaw wenza ukubonakala SNL 's Uhlaziyo lweempelaveki icandelo, apho walwamkela ngobubele uxolelo lukaDavidson. Umdlalo omnene wawusele ufile-kude kube yile veki, xa u-Davidson etyhila ukuba 'uxolile' wakhe 'wanyanzelwa.'
Khange ndicinge ukuba ndenze into embi. Kwakungathi amagama agqwethiweyo ukuze umntu adume, utshilo u-Davidson kwi-Netflix ekhethekileyo. 'Ndiye ndahlekisa ngalo mfo ngenqatha yamehlo emva koko, ngathi, ndinyanzelekile ukuba ndixolise.'
iswekile simahla simahla sineekhekhe zokupheka
Kwakhona, izimvo zikaDavidson azikhange zihambe kakuhle kubabukeli abaninzi, ngakumbi kuba UCrenshaw wayephakathi kwabantu ngubani owanikezela ngenkxaso ku Davidson emva kokuba ethumele umyalezo malunga ne-Instagram. Kodwa ingqungquthela yeTexas ayikhange ibonakale ikhathazwa yingxelo yomhlekisi. Ngapha koko, wayebonakala ehlekisa.
'Kufana nomsebenzi wethu wokuhlekisa odityaniswe esinqeni kuba akayeki ukucinga ngam,' utshilo uCrenshaw ngexesha lokuvela ngoLwesihlanu Impungutye & amp; Abahlobo . Kubuhlungu kancinci. Sibe nomzuzu olungileyo, uyazi, ngelo xesha kwi-2018. Ekhohlo nasekunene bayayithanda. Ke, uyazi, asifuni ngokwenene ukuyonakalisa loo nto. '
Uqhubeke wathi: 'Ukunyaniseka, ukuba sithathe yonke into ethethwa ngabahlekisi ngokukhethekileyo kwiNetflix, ilizwe lethu liya kuba kwilizwe elibuhlungu. Ndingathanda ukukhumbula lo mfo ndambona buqu ndaza ndaxhoma nobobusuku. '
abadlali abalishumi abaphezulu kwi-nba
ndizenza njani iibhere gummy